अझै कहिलेसम्म हुन्छ वर्षा ?
अझै कहिलेसम्म हुन्छ वर्षा ?	By नवीन सन्देश on	१९ आश्विन २०७३, बुधबार १३:३१
काठमाडौँ । दशैँ नजिकिदै गर्दा पनि बर्षा हुने क्रम नरोकिएपछि सर्बसाधारणमा दशैँ पनि हिलो चिप्लो हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । मंगलबार र बुधबार पनि देशका विभिन्न स्थानमा बर्षा भएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण मौसम बदली भई विभिन्न स्थानमा वर्षा भएको हो । मङ्गलबार रातिदेखि विकसित भएको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशमा मध्य र पूर्वी भेगमा बढी असर देखिएको हो।
मौसमविद् समीर श्रेष्ठका अनुसार न्यूनचापीय प्रणाली अहिलेमध्ये भेगमा केन्द्रित भएको छ। हिजो पूर्वका धेरै स्थानमा पानी परेको र आज दिउँसो मध्यभेगमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको उनी बताउछन् ।श्रेष्ठका अनुसार तुलनात्मक रुपमा पश्चिममा कम असर देखिएको छ । मनसुन हटिनसकेको र यसको प्रभावले पनि वर्षात भएको मौसमविद् श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार स्थानीय वायुको प्रभाव र जलवास्पयुक्त हावा पर्याप्त रहेकाले यो प्रणाली केही दिन जारी रहनेछ ।
मनसुन सकिने अन्तिम समय भए पनि यो वर्ष ढिलो गरी मनसुन सुरु भएकाले वर्षा लम्बिएको बताइन्छ । सामान्यतः नेपालमा जुन १० बाट मनसुन सुरु भई सेप्टेम्बर २३ मा हट्छ, तर यो वर्ष केही ढिला गरी मनसुन सुरु भएको थियो । आज काठमाडौँ उपत्यकासहित मध्यभेगका अधिकांश स्थानमा पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार काठमाडौँमा २, ओखलढुङ्गामा ३ र ताप्लेजुङ्मा ४५ मिलिमिटर वर्षात भएको छ ।
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts ६ कार्तिक २०७३, शनिबार १४:२३ 0	भारतमा ६५ लाख डेबिट कार्ड ‘ह्याक’
६ कार्तिक २०७३, शनिबार १४:१८ 0	महाअभियोग प्रस्ताब अचानक होइन: ओली
६ कार्तिक २०७३, शनिबार ११:०० 0	सानिमा बैंकमा एसिस्टेन्ट देखि म्यानेजरसम्मलाई अबसर